‘त्यो प्रेम विवाहलाई नगरपालिकाले मान्यता दिन सकेन’ [नालीबेलीसहित] – Jaljala Online
‘त्यो प्रेम विवाहलाई नगरपालिकाले मान्यता दिन सकेन’ [नालीबेलीसहित]
Posted on August 9, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
साउन २४, काठमाडौँ । स्थानीय तहको सामाजिक समस्या थाहा पाउने हो भने नगर वा गाउँपालिकाका उपप्रमुखलाई सोध्नुपर्छ ।
यो खबर हामीले अनलाइनखबरबाट साभार गरेका हौ न्यायिक समितिको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने भएकाले उपप्रमुखहरुले आफ्नो पालिकाभित्रको सामाजिक समस्याबारे मिहीन विश्लेषण गर्न सक्छन् ।
यसअघि हामीले मोरङको बेलबारी र सिन्धुपाल्चोकका केही पालिकाहरुका उपप्रमुखलाई त्यहाँको सामाजिक समस्या के छ भनेर सोधेका थियौं । ती ठाउँका उपप्रमुखहरुले पति-पत्नीवीच विवादहरु बढेको अनुभव सुनाएका थिए । परिवार र समाजमा विछृंखलता बढेको ती उपप्रमुखहरुको निश्कर्ष थियो ।
यसपटक हामीले कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रननगर नगरपालिकलाकी उपमेयर मोहनमाया भण्डारी (ढकाल) सँग त्यस्तै सामाजिक विषयहरुमा प्रश्न गर्‍यौं ।
कर्णालीका स्थानीय तहको सामाजिक समस्या चाहिँ पूर्व र मध्य नेपालको भन्दा केही फरक किसिमको रहेछ । ढकालका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा सम्बन्ध विच्छेदभन्दा पनि कम उमेरमा बिहे गरेर विवाह दर्ताका लागि आउने जोडीको समस्या जटिल देखिएको छ । कानूनले तोकेभन्दा कम उमेरका दम्पतीको बिबाह दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले जटिलता पैदा भएको ढकालले अनलाइनखबरलाई बताइन् ।
उपमेयर ढकालले यसो भनिरहँदा हाम्रो अध्ययनमा जाजरकोट लगायतका कतिपय पहाडी जिल्लामा श्रीमती/छोराछोरी छाड्ने र बहुविवाह गर्ने समस्या जटिल देखिएको छ । श्रीमानले रक्सी खाएर श्रीमती पिट्ने लगायतका घरेलु हिंसाका समाचार कर्णालीका पहाडी जिल्लामा बढी सुनिने गरेका छन् । तर, कर्णाली प्रदेशको मुख्यद्वार मानिने सुर्खेतमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु कमै देखिएको ढकालको तर्क छ ।
राजा वीरेन्द्रका पालामा ०३३ सालमा योजनावद्ध शहरका रुपमा विकसित भएको शहर हो- वीरेन्द्रनगर । मध्यपश्चिम विकासक्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम भएपछि पञ्चायती सरकारले वीरेन्द्रनगरको सरकारी जग्गा, बसोबास, बाटो सबै योजनावद्धरुपमा अघि बढाएको थियो । पञ्चायतकालमा राजमार्गभन्दा मुनि कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याइएको थियो । तर, अहिले खेतमा पनि शहर र बस्ती बढेको छ । अझ, कर्णाली प्रदेशको राजधानी भइसकेपछि त यहाँ ह्वात्तै बस्ती बढ्न थालेको छ ।
अहिले नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगरमा फेरि प्लानिङ सुरु गरेको उपमेयर ढकाल बताउँछिन् । ‘त्यहाँ खेत थियो, बाटो खोल्ने र बेच्ने क्रम बढ्यो’ उनले अगाडि भनिन्, ‘कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले नै प्लानिङ गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभागमार्फत प्लानिङको काम अगाडि बढाइयो । अहिले यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।
वीरेन्द्रनगरको मेयर पद नेपाली कांग्रेसका नेता देवकुमार सुवेदीका हातमा छ । उपमेयर र बहुमत सदस्य तत्कालीन एमाले अर्थात् नेकपाले जितेको अवस्था छ । तथापि नेकपा नेतृ मोहनमाया उपप्रमुखको अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको हुनाले मेयरले अधिकार दिएनन् भनेर रोई-कराई गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन् ।
उपमेयर बनेपछि एलएलबी अध्ययन !
स्थानीय तहको उपप्रमुख भएपछि मुद्दा-मामिला हेर्नुपर्ने भएकाले कानूनी ज्ञान आवश्यक हुन्छ । चुनाव जितेपछि मोहनमायालाई कानुन अध्ययनको भोक जाग्यो र उनले नेपालगञ्ज झरेर एलएलबीको जाँच दिइन् ।
स्नातकमा समाजशास्त्र र स्नातकोत्तरमा राजनीतिशास्त्र पढेकी ढकालले चुनावपछि कलेज गएर एलएलबीको जाँच दिएको सुनाउँदै भनिन्, ‘न्यायिक समितिको संयोजक भइसकेपछि अलिअलि कानून पढ्नुपर्ने भयो । वीचमा किन मौकाको फाइदा नलिऔं भन्ने भएपछि नेपालगञ्जबाट जाँच दिएकी हुँ ।’
विद्यालयमा पढ्दा संगठनको सदस्य नबनेकी ढकाल ०५५/०५६ मा क्याम्पस गएपछि एमालेनिकट अखिलको प्रारम्भिक कमिटी हुँदै सुर्खेत जिल्ला कमिटीमा पुगिन् । महिला विभाग प्रमुख हुँदै राष्ट्रिय परिषद सदस्यसम्म बनिन् । अनेमसंघ सुर्खेतको सचिव र अध्यक्ष भइन् । अहिले उनी नेकपाको कर्णाली प्रदेश सदस्य छिन् ।
सुर्खेतको बुलबुले एफएममा केही वर्ष काम गरेको र समाचार वाचन गरेको सुनाउँदै ढकालले भनिन्, ‘महिला संघको जिल्ला कमिटीमा भइसकेपछि रेडियो पनि छाडियो ।’
आफूले मेयरमा चुनाव लड्न चाहे पनि पार्टीले उपमेयरको टिकट दिएको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘मेरो चाहना त मेयरमै लड्ने थियो । मैले भनेकी पनि थिएँ, मेयरमा उठ्न पाएकी भए त्यहाँ पनि जित्छु ।’
उपमेयर मोहनमायालाई नेपाल सरकारले पछिल्लो समय नगर विकास कोषको सदस्यमा मनोनित गरेको छ । गत महिनाको क्याबिनेट बैठकले दमककी उपमेयर गीता अधिकारी र भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालसमेत तीनजनालाई नगरविकास कोषमा मनोनित गरेको हो । यसका साथै मोहनमाया राष्ट्रिय विकास परिषदको सदस्य पनि हुन् ।
उपमेयर ढकालसँग हामीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका स्थानीय समस्याका साथै उपमेयरले भोगेका अनुभवका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । उनको यो अनुभव देशभरिका अन्य उपप्रमुखहरुलाई पनि सन्दर्भ सामाग्री हुन सक्छ ।
कम्युनिष्ट उपमेयरलाई कांग्रेसका मेयरसँग काम गर्न कत्तिको अप्ठ्यारो हुँदोरहेछ ?
प्रमुख र उपप्रमुखका आ-आफ्ना जिम्मेवारी छन् । प्रमुखले के गर्ने, उपप्रमुखले के गर्ने भन्ने संविधानमै प्रष्ट छ । ०५४ साल वा ०४९ को स्थानीय निकायमा उपप्रमुख भनेको प्रमुख नहुँदा प्रमुखले दिएको खण्डमा कार्यवाहक भइ काम गर्नू भनिएको थियो । र, प्रमुखले लाए अह्राएको काम गर्नु भन्ने रहेछ त्यसबेला । उपप्रमुखको खास भूमिका त्यसबेला केही पनि थिएन । तर, अहिले हेर्नुहुन्छ भने उपप्रमुखहरुको संवैधानिक हिसाबले नै प्रष्ट भूमिका छ ।
हामी स्थानीय सरकार भन्छौं । त्यहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छ । र, त सरकार छ । न्यायिक समितिको प्रमुख नै उपप्रमुख हुने भनेको छ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख नै हो । स्थानीय तहको अनुगमन समितिको प्रमुख पनि उपप्रमुख नै हो । बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक कुराहरुसँग गाँसिएको विषयको मुख्य नेतृत्व पनि उपप्रमुख नै हो । महिला, वालवालिका ज्येष्ठ नागरिकहरु, त्यसपछि सामाजिक संघसंस्था परिचालन, नियमन तथा अनुगमनको प्रमुख पनि उपप्रमुख नै हो । हरेक किसिमले उसको भूमिका प्रमुखकै रुपमा संवैधानिकरुपले प्राप्त भइसकेपछि र हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौं भने त्यहाँ प्रमुख र उपप्रमुख भन्नेचाहिँ छैन । आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा प्रमुखले मलाई अधिकार दिनुभएन भन्नुपर्ने अवस्था छैन ।
तर, कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुखले पेलेको गुनासो उपप्रमुखले गरेको सुनिन्छ नि ?
प्रमुख भनेको सरकार प्रमुख पनि हो । एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति पनि हो । सकेसम्म आफ्नो पहलकदमीमा काम गर्न खोज्नु स्वाभाविक पनि होला । तर, त्यसमा उमप्रमुखहरुले गुनासो गर्नुहुँदैन । उपप्रमुखहरुले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने बुझेर, मैले मेरो अधिकारभित्रको काम पूरा गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । गुनासो गरेर कसैले सुन्ने र न्याय दिनुपर्छ भन्ने ठाउँ होइनजस्तो लाग्छ । उपप्रमुख आफैंले आफ्नो काम गर्नुपर्छ ।
उसोभए ती स्थानीय तहमा प्रमुख र उप प्रमुखवीच विवाद हुने कारण के हो ?
कतिपय कुरामा सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुखले गर्नुपर्ने सबै काम प्रमुखले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यहाँ उपप्रमुखसँग पनि सल्लाह गर्दा हुन्छ । सिस्टमको कुरा पनि हुन्छ । बोर्डले निर्णय गरेर, यो-यो प्रक्रियाबाट गर्ने भनेर काम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । आदेशको भरमा काम गर्न त प्रमुखलाई पनि अधिकार छैन नि । अधिकार छ भनेर उपमेयरले पनि आदेशको भरमा भन्दा पनि सहकार्य गरेर काम गर्न सकेको खण्डमा कुनै विवाद आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
वीरेन्द्रनगरमा कांग्रेस मेयर र कम्युनिष्ट उपमेयरवीच कुनै विवाद छैन त ? कतिपय पालिकामा त एउटै पार्टीका प्रमुख-उपप्रमुखवीचमै लफडा हुने गरेको छ…
हाम्रोमा अहिलेसम्म त्यस्तो छैन । म उपप्रमुख हुँ, प्रमुखले मलाई पेल्नुभयो भन्ने अनुभूति अहिलेसम्म मलाई भएको छैन, गर्न पनि परेको छैन । हामी आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा छाैं । हामी बोर्ड मिटिङ बस्नुपर्‍यो भने पनि प्रमुख/उपप्रमुख बसेर एजेण्डा तयार गछौर्ं । अफिसबाट ल्याउनुपर्ने एजेण्डा प्रशासकीय अधिकृतले हेर्नुहुन्छ, प्रमुखले हेर्नुहुन्छ, मैले हेर्छु । यो एजेण्डा ठीक छ भन्ने लाग्यो भने त्यसमा हामी बोर्ड बैठक बस्छाैं । उपप्रमुखलाई थाहै नदिइ बोर्ड बैठक बसेर एजेण्डा जाने भन्ने हाम्रो नगरपालिकामा हुँदैन । त्यो भएको हुनाले बिवाद पनि हुँदैन ।
पालिका प्रमुखले उपप्रमुखसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढ्दा समस्या नहुँदोरहेछ …
स्थानीय सरकारको प्रमुख/उपप्रमुख भइसकेपछि त्यो किसिमले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दुबैजना तयार हुनुपर्छ । उपप्रमुख भनेको केही पनि होइन, मैले सबै गर्दा हुन्छ भन्ने भ्रम प्रमुखले पनि राख्नुहुँदैन । र, समन्वय नगरी सबै मैले मात्रै गर्न सक्छु भन्नु उपमेयरले पनि हुँदैन ।
आ-आफ्नो जिम्मेवारीमा प्रमुख र उपप्रमुख त छँदैछ । आ-आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने ठाउँ पनि छ । यसमा एउटाले राम्रो गरेर देखाउने ठाउँ पनि छ । तर, समग्रमा दुबैले समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एकलरुपमा निर्णय गरेर जानुभयो भने त्यहाँ विवादको अवस्था आउँछ नै ।
तपाईं न्यायिक समितिको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । यसवीचमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र के कस्ता सामाजिक समस्या पहिचान गर्नुभयो ?
हाम्रोमा धेरैजसो बढ्दो शहरीकरण छ । जग्गा विवादका कुराहरु बढी छन् । ठेकेदारले काम लगाएर श्रमिकलाई ठगेको, लेनदेनसम्बन्धी समस्या आउने गरेका छन् । सामाजिक समस्याका रुपमा छोराछोरीको जन्मदर्ता नगरिदिएको, विवाह दर्ता नभएको जस्ता समस्या अलि बढी छन् ।
कतिपय पालिकाका उपप्रमुखहरुले समाजमा श्रीमान-श्रीमतीवीच झगडा र सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । वीरेन्द्रनगरमा यस्तो समस्या कुन रुपमा देखिएको छ ?
हामीकहाँ डरलाग्दो रुपमा सम्बन्ध विच्छेदको समस्या देखिएको छैन । हाम्रो पहाडी बस्तीमा हेर्नुहुन्छ भने त त्यहाँ वस्ती धानेकै महिलाले छ । कतिपय गाउँका पुरुषहरु रोजगारीका क्रममा सबै विदेशमा छन् । घरव्यवहार चलाउने, बच्चाबच्ची हेर्ने, समितिहरुमा बस्नेदेखि लिएर ग्रामीण वस्ती धान्ने नै महिलाहरु हुन् । उनीहरुलाई यो सम्बन्धविच्छेद भन्ने पनि सरोकारै नभएजस्तो स्थिति छ । यसले गर्दा हाम्रोतिर त्यति साह्रो सम्बन्ध विच्छेदका केसहरु अदालतमा पनि आएका छैनन् जस्तो लाग्छ ।
दोस्रो विवाहवाला समस्या कत्तिको छ ?
त्यस्तो त छैन । अहिलेको कानूनले बहुविवाहको परिकल्पना गरेको छैन । तर, भइसकेको घटना दर्ता गर्नुपर्छ भन्छ क्या फेरि । पञ्जीकृत त गर्नुपर्‍यो नि ।
न्यायिक समितिको प्रमुखको हैसियतले भन्नुपर्दा कतिपय पारिवारिक समस्याको समाधानमा कानूनले नै अप्ठ्यारो पारेको अनुभव तपाईंसँग छ ?
समस्या के भने हाम्रोमा १५/१६ वर्षमै लभ म्यारिज गर्ने चलन छ । १८ वर्ष लागेको, ब्याच्लर पढ्दै गरेको एउटा किशोरले प्रेम विवाह गर्‍यो । कानूनअनुसार अहिल्यै बिहे दर्ता गर्न मिल्दैन, त्यसैले पछि बिहे गर्ने भनियो र केटी केटाको भरमा भित्रिइन् । तर, ६/७ महिनापछि उनीहरुको कुरै मिलेन । त्यसपछि किशोरीका बुबाआमा हामीकहाँ आउनुभयो । मेरी छोरी घरमा बसेको ६/७ महिना भइसक्यो, बिहे गर्दैनन्, ऊ पीडित भइ भन्नुभयो ।
अब भन्नोस्, उसलाई बिहे दर्ता गरिदिन मिल्दैन । कानूनतः २० वर्ष नपुगी उनीहरुले बिहे दर्ता गर्न पाउँदैनन् । तर, ६/७ महिना त श्रीमानको घरमा बसिसकेकी छ, यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? ६/७ महिना श्रीमानको परिवारसँग बसेकी छ, तर कानूनले केही गरिदिनै सकिँदैन ।
एकदिन एउटा कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले अनौपचारिक रुपमा यो घटना सेयर गरें । उहाँले त्यसलाई यस्तो-यस्तो भएको भनेर एउटा घटना दर्ता गरेर राखिदिन सकिन्छ, अन्यथा केही गर्न सकिँदैन भन्नुभयो ।
त्यसपछि हामीले केटीका बुबाआमालाई डाक्यौं । हाम्रा वकिल साहेब पनि बस्नुभयो । हामीले एउटा नमीठो तरिकाले के भन्यौं भने कानूनीरुपमा त हामी न्याय दिन सक्दैनौं, तपाईहरु आफ्नी छोरीलाई माइतीघरमा फिर्ता लग्नोस् । ब्याचलर पढेकी छ, भोलि मास्टर्स पढ्छे, एउटा पेशा व्यवसाय गर्छे । त्यसपछि त उसले आफ्नो जीवनसाथी खोज्छे । अहिले ६/७ महिना हुँदा त कुरा मिल्न छोडिसक्यो भने त्यही मान्छेसँग बिहे दर्ता गरेर बस्नुपर्छ भन्ने के छ ?
यति भनिसकेपछि केटीका बुबाआमा कन्भिन्स भए । उनी अहिले पढ्दैछिन् । भर्खरै १७ वर्ष पुगेकी छिन्, अहिले बिहे गरिहाल्नुपर्ने केही छैन ।
मैले उमेर नपुगी बिहे गरें भने बिहे दर्ता हुँदैन भन्ने सन्देश किशोर-किशोरीहरुमा पुग्यो भने उनीहरुले उमेर नपुगी बिहे गर्दैगर्दैनन्
कानूनले २० वर्ष नपुगी बिहे गर्नै नदिने, तर अगाडि नै प्रेमविवाह गर्ने यस्ता जोडीहरुको समस्या कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? कतै २० वर्षे मापदण्डको कानून नै व्यवहारिक पो भयो कि ?
हाम्रो देशमै समस्या के छ भने कानूनलाई व्यवहारमा अलि बढी प्रयोग गर्न खोज्ने । यो अलि समस्या छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने कानूनले २० वर्ष नपुगी बिहे हुन्न भन्या छ भने एक/दुईवटा घटना समस्यामा पर्न सक्छन् । तर, कानूनलाई पूर्णतया लागू गरेर गयौं भने केही समयपछि त्यो आफैं सिस्टममा बस्छ क्या ।
तर, कानूनले जे भने पनि दुई-चार वर्ष लुकाएपछि बच्चाबच्ची जन्मिन्छ, त्यसपछि बिहे दर्ता भैहाल्छ नि भनेर यसलाई देखेको नदेख्यै गर्ने सामाजिक प्रवृत्ति छ । यसले कानूनलाई पालना गर्नमा केही रोकावट आएको जस्तो लाग्छ । तर, कानूनलाई पालना गर्नका लागि केही हदसम्म निरंकुशजस्तो हुनैपर्छ । कानूनले जे भनेको छ, त्यसको दायरा उल्लंघन गर्नुहुँदैन भनेर सबैले अगाडि बढ्ने हो भने केही समय पछाडि सिस्टम बस्न सक्छ ।
मैले उमेर नपुगी बिहे गरें भने बिहे दर्ता हुँदैन भन्ने सन्देश किशोर-किशोरीहरुमा पुग्यो भने उनीहरुले उमेर नपुगी बिहे गर्दैगर्दैनन् । १७ वर्षमा बिहे गरे पनि परिवारले स्वीकार्छ, कानूनमा नलेखेर के भयो र भन्ने कि कानूनलाई लागू गर्ने ?
नगरपालिकाभित्र हुने न्याय निरुपणकै विषयमा थप छलफल गरौं । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरुलाई तपाईं कसरी छिनोफानो गर्नुहुन्छ ?
हामीलाई सजिलो के छ भने सबै सरंचना निर्माण गरिसकेका छाैं । सुरुमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन विधेयक पारित गर्‍यौं । त्यसपछि न्यायिक समिति गठन गर्‍यौं । अहिले न्यायिक समितिको सचिवालयमा कर्मचारीहरु हुनुहन्छ । बरिष्ठ कानुनी अधिवक्ता सल्लाकार हुनुहुन्छ । उहाँलाई हामीले राखेका छाैं । जुनसुकै समयमा उहाँ आएर हामीलाई समय दिएर मुद्दाहरु हर्ने र छलफलमा उहाँ पनि बस्ने र सिकाउने गर्नुहुन्छ । हामी अहिले सिस्टममा अगाडि बढेका छाैं ।
स्थानीय तहले गर्ने न्यायिक निरुपणको विषय कत्तिको विवादास्पद र टाउको दुखाउने किसिमका हुन्छन् ? कतिपय उपमेयरहरुले मुद्दा मामिलाले टाउको खायो भनेर गुनासो गर्ने गरेको सुनिन्छ नि ?
प्रथमतः न्यायिक समितिले गरेका निर्णय मन पराउनैपर्छ र यही अन्तिम हो भन्ने हुँदैन । न्यायिक समितिले गरेको निर्णय कसैलाई चित्त बुझेन भने जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, कति कुरामा छलफल चलाउने र कति विषयमा न्यायिक निरुपण गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । जस्तो- ११ वटा विषयमा न्यायिक निरुपण गर, १३ पटा विवादहरु मात्र समाधान गर भनेको छ । विवाद हामीले समाधान गर्न मिल्यो भने मात्र गर्ने, नत्र उनीहरु अदालत जान्छन् ।
जस्तो- जग्गासम्बधी विवाद आयो भने हामीले समाधान मात्र गर्नुपर्ने हो, विवादको फैसला अदालतले गर्ने हो । मानाैं, नगरपालिकामा एउटा जग्गासम्बन्धी विवाद आयो । विवाद आइसकेपछि हामीसँग भएको नक्सा शाखाले हेर्छ, कुन कित्ताको समस्या हो । त्यहाँ कस्तो के छ ? उसले स्थलगत जान्छ, हेर्छ र रिपोर्ट दिन्छ । एउटा आधिकारिक निकाय नक्सा शाखाले दिएको रिपोर्ट हामीसँग हुन्छ । अनि कानुनीरुपमा के छ भनेर हामीले सबै हेर्छौं र तपाईंको स्थिति यो-यो हो है भनेर प्रष्टसँग भनिदिन्छाैं । समग्रमा न्यायिक समिति एउटा कानुनी सरंचना भएको हुनाले कानुनले जे भन्छ, हामी त्यही मात्र गर्छौं । त्यही अनुसार अघि बढ्छाैं । प्रष्टसँग भनिदिन्छौं ।
हामी सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो, सकेसम्म ३ दिन या ४ दिनभित्रमा उहाँहरुलाई जे हो, त्यही गरिदिन्छौं । यसो गर्दा अहिलेसम्म सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म असन्तुष्टि भन्ने देखिएको छैन ।
पारिवारिक विवादका घटनामा नि ?
म नगरपालिकामा आइसकेपछि ९ जनाको सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाहरु आए । पुरुषहरुले सम्बन्ध विच्छेदको उजुरी दिन्छन् भन्ने मलाई अनुभव थिएन । अचम्म लाग्यो । उनीहरुको खास गुनासो श्रीमतीसँग कुरा नमिल्ने भन्ने रह्यो ।
तर, मिलाउँछु भनेर पनि नमिल्ने खालको अवस्थामा समेत स्थानीय तहले सम्बन्ध विच्छेद गर्दिन मिल्दैन । सम्झाएरै पठाउने हो । न्यायिक समिति भनेको अदालत हैन, मेलमिलाप कायम गर्ने मात्र हो । अदालतले जस्तो सम्बन्ध विच्छेद नै गरिदिनुपर्ने होइन ।
हामीकहाँ आउने मुद्दा भनेकै सामुदायिक समस्या हुन् । कसैले जग्गा मिचेर पर्खाल लगायो, काम गरेको ज्याला दिएन भन्ने खालका आउने गर्छन् । सामुदायिक समस्याहरु र देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु आउँछन् फौजदारी मुद्दा त हामीले लिन पनि मिल्दैन, सिधै पुलिसकोमा जान्छ । पुलिसले अनुसन्धान गर्छ र अदालतले निर्णय गर्छ ।
जस्तो- बालविवाहको कुरालाई हामीले मिलाउन मिल्दैन । त्यो फौजदारी अन्तर्गत नै जान्छ, हामीले केही गर्न पाइँदैन । बहुविवाहबारे केही गर्न पाइँदैन । त्यस्ता मुद्दाहरु हामी लिदाँ पनि लिँदैनाैं ।
मुद्दाको भारी बोकेर टाउको दुखाइरहेका अन्य उपप्रमुखहरुलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
न्यायिक समितिको संयोजक भएर अनावश्यक रुपमा सबै कुरा मै मिलाउँछु भनेर छलफलमा बस्दा धेरैजसो उपप्रमुखहरुको टाउको दुखाइ भएको छ । र, उहाँहरुको धेरै समय झगडा मिलाउनमै गएको छ ।
पहिलो कुरा, म उहाँहरुलाई के भन्छु भने ती सबै हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन । कानूनले हामीलाई जुन-जुन विवाद समाधान गर भनेको छ, जुन-जुन कुरा न्यायिक समितिले गर भनेको छ, त्यहाँभन्दा पर नहेरौं । हामीले कहिलकाहिँ हाम्रो क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषयलाई छलफल चलाएर हस्ताक्षर गर्याैं भने हाम्रो विरुद्ध मुद्दा लाग्न सक्छ । कानुनले मलाई जुन अधिकार दिएको छैन, त्यो अधिकार मैले कसरी छलफल चलाएर कसरी समाधान गरिदिन सक्छु ? त्यो अधिकार त मलाई दिएकै छैन । त्यसैले, आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिरको मुद्दा हेरेर अनावश्यक भार बोक्ने र अधिकांश समय मुद्दा मामिलामा अल्झिने काममा उपप्रमुखहरु लाग्नुहुँदैन । जति आफनो अधिकार हो, कानूनले आफूलाई जति गर भनेको छ, त्यो संविधान, कानुनभन्दा बढीमा हामी हात नहालौं ।
दोस्रो, सबै झगडामा उपप्रमुख बस्ने होइन भन्छु म । त्यहाँ त समिति छ, सचिवालय छ, कानुनी अधिवक्ता हुनुहुन्छ । छलफलमा विज्ञलाई बोलाउन सकिन्छ । सल्लाकारहरु राख्न सकिन्छ । तर, उपप्रमुख आफैं स-साना झैंगडामा बसेर हरेक मुद्दामा सहभागी हुदाँ अधिकांश समय त्यसैमा सकिन्छ र उसले बाँकी क्षेत्र हेर्न नसक्ने हुन्छ । त्यस्तो हामीले गर्नहुँदैन भन्छु म ।
‘बाँकी क्षेत्र’ भन्नाले उपप्रमुखले मुद्दा मामिलाबाहेक अनुगमनको काममा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो हैन त ?
अनुगमनमा उपमेयरहरुको भूमिका अलि ठूलो छ । कतिपय कुराहरु स्थानीय सरकारका रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय विकासका कुराहरु, जाँचपासका कुराहरुमा उपप्रमुखले अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा अफिसियल मुद्दाहरु पनि हुन्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न धेरै समय लगाउनुपर्ने पनि हुन्छ । खट्नुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै हालतमा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
यसबाहेक उपप्रमुखका काम अरु पनि त होलान् …
बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाउनेदेखि लिएर राजस्व परामर्श समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख नै हो । हरेक मिटिङ उपप्रमुख नभई बस्दैन । त्यसो हो भने हरेक मिटिङ आफ्नो अध्यक्षतामा बसालेर उपप्रमुखले चलाउनुपर्ने हुन्छ । बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । यदि प्रकृया मिचेर काम भएको छ भने त्यसलाई रोक्न पनि सकिन्छ । प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्‍यो नि । सरकारले प्रकृया भन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउने, राजस्व बढाउने, नीति कार्यक्रम बनाउने भन्ने हुँदैन । उपप्रमुखलाई थाहै नदिई यस्ता कार्यक्रम गर्ने भन्ने संविधानले दिएको छैन । यस्ता काममा उपप्रमुखको भूमिका हुन्छ ।
विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मुख्य समस्या के हो ?
यहाँको मुख्य समस्या भनेको पूर्वाधार नै हो । शहरीकरण तीव्र भएर गएकाले नगरपालिकाको आफ्नो बजेटले मात्रै त सम्भव छँदैछैन । जस्तो- हाम्रो नगरपालिकामा ०६८ सालमा १ लाख ४ हजार जनसंख्या थियो, अहिले करिब ३ लाख मानिसको बसोबास यहाँ छ । यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र सुरक्षा लगायतका हरेक किसिमका सर्भिस त नगरपालिकाले उनीहरुलाई दिनुपर्‍यो नि । हामीलाई अनुदान प्राप्त एक लाखका लागि हुन्छ, तर हामीले सेवा प्रवाह त तीन लाखलाई गर्नुपर्छ ।
हुनत अहिले प्रदेशकै राजधानी पनि भएकाले प्रदेशको पनि अलिकति ध्यान गएको छ । संघीय सरकारका पनि कतिपय कार्यक्रमहरु परेका छन् । राजधानी भएपछि स्वाभावैले केही त परिवर्तन त होला ।
जनसंख्याको चाप बढ्दै जाने हो भने समस्या अझ थपिँदै जालान् । जस्तो- अव्यवस्थित बसोबास, सुरक्षा चुनौती आदि…
बसाइँ सराईको चापलाई अवसरका रुपमा लिएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । अब शहरीकरण बढ्दै जाँदा वीरेन्द्रनगर उपत्यका कृषि क्षेत्र नरहन सक्छ । यसलाई हामीले प्लानिङमा समेटेर अगाडि जाँदैछौं । वीरेन्द्रनगर औद्योगिक शहर नभएर शैक्षिक, पर्यटकीय र प्रशासकीय शहर नै हो । प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा प्रदेशको राजधानी भइसक्यो, अब शिक्षा र पर्यटनको क्षेत्रमा पनि अब विकास गर्नुपर्नेछ ।
आज भारी वर्षाको सम्भावना, यस्ताे छ २४ घण्टे चेतावनी
Posted on August 10, 2019 August 10, 2019 Author Jaljala Online
साउन २५, काठमाडौं । आज (शनिबार) देशका अधिकांश स्थानमा बदली भई केही ठाउँमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित वर्षा हुने सम्भावना उल्लेख गर्दै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले २४ घण्टे चेतावनी जारी गरेको छ। साथै आज पहाडी भेगमा भारी वर्षा हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। आगामी २४ घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दैै मौसम पूर्वानुमान […]
दाङमा बसको ठक्करले कुखुरा मरेपछि चक्काजाम
Posted on October 26, 2019 Author Jaljala Online
कार्तिक ९, काठमाडौं । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१४ लुहाडबरामा बसको ठक्करले कुखुराको भाले मरेपछि स्थानीयहरुले चक्काजाम गरेका छन्। कुखुराको भाले मरेपछि उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै स्थानीयहरुले सडकमा ढुंगा थुपार्नुका साथै काठ, बाँस तेर्साएर सडक अवरुद्ध पारेका थिए । खैराहा-कोठारी सडकखण्डमा चल्ने बसले स्थानीयको भाले मारेर भागेपछि बिहीबार दिउँसो केहीबेर स्थानीयले सडक अवरुद्ध पारेको जानकारी आफूले पाएको वडा […]
फेसबुक, ट्वीटरमा यस्ता काम नगर्नुस, पाँच वर्ष जेल जाने कानुन बन्दैछ
Posted on June 14, 2019 Author Jaljala Online
जेठ ३१, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले फेसबुक ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने प्रावधान यथावत् राखेर सूचना प्रविधि विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। यो खबर मनोज सत्यालले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । समितिले सांसद बिना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियालाई समेत कस्ने प्रावधान कायमै राखेर विधेयक अगाडि बढाउन उचित हुने […]
यस्तो छ त्रिशूली बस दुर्घटनाको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान
आज २०७६ साउन २५ गते शनिबारको राशिफल, तपाईको कस्तो छ ?